तीस घर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा
काभ्रे, साउन २५ गते । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको मण्डनदेउपुर नगरपालिका–५ र ६ का करिब ३० घर बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन् । गत बुधबार राति परेको भीषण वर्षाका कारण आएको बाढी र पहिरोका कारण बस्ती उच्च जोखिममा परेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिका कार्यपालिका प्रवक्ता एवं वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष डिल्लीप्रसाद आचार्यले करिब ३० घर बाढी र पहिरोको जोखिममा परेको र तीन घर पहिरोले पुरिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार दुम्रडाँडाका राजकुमार चौलागार्इंको घर गोठसँगै एउटा गाई र पाँचवटा बाख्रा बगाएको छ । त्यसैगरी भागेटारका राजकुमार विक र सिपाघाट महाकाँलका सोमप्रसाद ढकालको घर पहिरोले पुरिएको छ । वडा नं. ५ खाटीचौरीका १४ घर पहिरोको उच्च जोखिममा परेपछि छिमेकीकोमा आश्रय लिन पुगेका छन् । घरको दायाँबायाँबाटै पहिरो आएको र सडक पूरै बगाएपछि स्काभेटर लगेर गाईभैँसी सार्न लागिएको भन्दै प्रवक्ता आचार्यले स्थानीयवासीलाई जोखिमपूर्ण स्थानबाट स्थानान्तरण गरिएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै वडा नं. ६ को सिपाघाट महाकाँलका १०÷१२ घर जोखिममा परेको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । घरमाथिको डाँडामा चिराचिरा परेको छ भने घरको दायाँबायाँ पहिरो गएको छ । ढाडखोलामा आएको बाढीका कारण सिपाघाट बजारको खानेपानी पाइप नै बगाएपछि खानेपानीको अभाव भएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । बाढीले कुलो बगाएको छ भने खेतबारी कटान गरेर जोखिम बढाएको छ ।
यसैबीच, प्रदेश सभाका सदस्यद्वय बसुन्धरा हुमागाईं र लक्ष्मण ढकालले मण्डनदेउपुर नगरपालिका बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्नुभएको छ । शुक्रबार नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइवा, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरीलगायत जनप्रतिनिधसहितको टोलीले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर स्थलगत अवलोकन गरेको थियो । सो अवसरमा स्थानीयले भूगर्भविद् ल्याएर परीक्षण गर्न र सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणको माग गरेका थिए । टोलीले वडा नं. ५ र ६ मा बाढी र पहिरोले पारेको असरको अवलोकन गरेको थियो । नगरप्रमुख टोकबहादुर वाइवाले राहत,
सुरक्षित बस्ती स्थानान्तरण, भूगर्भविद् ल्याउने लगायतको काम तत्काल नगरले गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो ।